Waa hadimo qaran Dal iyo xukuumad sad-bursiimo loogu naasnuujinaayo beel keliya.
Monday September 09, 2019 - 18:07:42 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Maanta shirkadihii dalka uga waynaa, sida telesom, si toos ah ayey xukumadii, uga sheegtay inay khald tahay in koota lugo xidho xadhigga internetka viper optic ee djibouti laga soo jiidayo markay iyadu tidhe waan awoodi karayna inaan soo jiido oo berbera keeno.
Waxa sido kale loo diiday in ay golis boosaaso keento hadaba su'aasha isweydiinta lihi waxa weeye Maxaa somecable loogu ogolaaday oo aan ahayn in ay madaxweynaha somaliland isku reer yihiin mulkiilaha shirkadaasi.
Maxaa maanta fooxi laga keenay bari, loo hor istaagay oo dhowr cashuurood loogu soo rogay,
Maxaa xoloohi burco loo yidhi wixii cashuur ah berbera ayaa lagaga qaadaya, si kabka berbera uga bato ka burco, oo ganacastado uuga wareegaan.
Madaxweynuhu wuxuu madaxtooyadii u raray xaafadiisa sido kale janankii ugu sareeyey ciidanka qaranka ku leeyahay beelihii darafyada cashuurtayada ku nooshihiin ,foolxumada halka ka soo socota waxa lays weydiinaya beeshu waxan miyey isla wada qaadatay oo waa waxay ku wada socdaan.
Waxay bulshadu isweydiinaysa sababta ay arrimahan foosha xun uga dhex dhacayan xukuumadda maanta jirta.
Xilalka ugu badan wuxu madaxweynuhu siiyey beeshiisa waxaana sido kale ay qaateen qandaraasyadii qaranka oo dhan.
Qodobada ay bulshadu ka cabanayaan waxa ka mid ah.
1)sameroon iyo ciise, iyo harti Sida loo la dhaqameyo, oo la yidhe cashuurtii ayaa naga cuuntaan.
2)Waxa garxajis ka booday Xilaalka oo dhan ee ay buuxsatay beesha madaxweynuhu.
3)Xishoodka habar jeclo - in loogu hanjabo ma la shiri kartaan garaxajiis.
4) Xisbiyadii qaranka oo la yaaban habdhaqanka xun marku ergi gaar ahi yimaadana lana heshiinayo marka uu tagana baarlamaanka la faro inuu ka baxo heshiiska.
5)Ganacasatadii wa waynayd oo yabaan, telesom, asli, indho deero, dhinac na kootada looga xidhayo dhinacna lagu tacadiyayo.
6)Culimadii diinta ayaa qaylinaysa waxaana hadalada laga guntay ka mid ah - Adan siiro wuxu yiidhi waa la isku bakhtiyayaa.
7)Madaxdhaqameedkii oo la xidh xidhayo la aflagaadeynayo sida boqorro la xidhay waynu ognahay buurmadaw waa tii la xidhay oo hadana hadalada laga daba lahaa.
8) Dawladihii jaarka aynu ahayn ayaa yaaban oo ethiopia waatii tidhi argagixisada ayaa naga soo gasha xaga somaliland.
9)Wasaaradihii dalka oo isku buuqsan oo kala garan waayey xilkoodii cashuuro kala duwan oo is barkan oo wasaarad kastaa ganacsatada dalka oo loo xanibayo ganacsigii xawliga u soconayey ee dalka dhexdiisa.
10)Waxa dalkii laga eryey haayadihii.
11)Beelo gaar ah ayaa ganacsigoodii la dhiirigelinayaa cashuur dhaafna loo samaynaya mashaariicdii dalkana la siinayaa.
Waxa la isweydiinaya beesha madaxweynuhu miyey qaban kariweyday mise way kula socdaan waxa dhacaya.